बच्चालाई पोषिलो खाना खुवाउनु नै रोगबाट बचाउनु हो | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता बच्चालाई पोषिलो खाना खुवाउनु नै रोगबाट बचाउनु हो
डा. जयदेव यादव, बालरोग विशेषज्ञ, हिमाल अस्पताल
त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स भैरहवाबाट बालरोग विषयमा एमडी गरेका डा. जयदेव यादव विगत ३ वर्षदेखि हिमाल अस्पतालमा कार्यरत छन् । उनले रशियाको यरेभान स्टेट मेडिकल युनिभर्सिटीबाट एमबीबीएस गरेका थिए । प्रस्तुत छ, बच्चालाई लाग्ने रोग, सुरक्षित तरीकाले हुर्काउनेलगायत विषयमा डा. यादवसँग आर्थिक अभियानका भवनाथ प्याकुरेलले गरेको कुराकानी :
बच्चालाई लाग्ने मुख्य रोगहरू के के हुन् ?
बच्चाको उमेरअनुसार उनीहरूलाई लाग्ने रोग पनि फरक–फरक हुन्छन् । मौसम परिवर्तन भइरहेका बेला बच्चामा रुघाखोकी, ज्वरो आउने गर्छ । बच्चाले फोहोर खाने कुरा खाएको छ भने पेटको खराबी हुन्छ । ज्वरो बिग्रेमा टाइफाइड ज्वरोलगायत रोग लाग्ने गर्छ ।
चिसोका कारण लाग्ने रोग के के छन् ?
चिसोका कारण लाग्ने रोग साधारण रुघाखोकीबाट शुरू भई बढ्दै गयो भने निमोनियालगायत रोग लाग्न सक्छ । तर, राम्रो पोषण पाएका बच्चालाई हत्तपत्त साधारण रोग लाग्दैन । पोषणको कमी भयो भने चाँडो रुघाखोकी लाग्नेलगायत समस्या उत्पन्न हुन्छ । त्यसैले, पोषणमा ध्यान दिनु अपरिहार्य छ । जाडोका बेला बच्चालाई न्यानो बनाएर राख्नुपर्छ । साधारण रुघाखोकीबाट शुरू भएर छातीमा सङ्क्रमण, निमोनियालगायत हुन सक्छ ।
बच्चालाई चिसोबाट बचाउन कस्ता उपाय अपनाउनु पर्छ ?
मौसम परिवर्तन भएका बेला बच्चाको प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुने हुँदा उनीहरूलाई चिसोबाट जतिसक्दो बचाउनुपर्छ । साथै धूलो, धूँवाबाट पनि जोगाउनुपर्छ । मौसम परिवर्तन भइरहेका बेला न्यानो कपडा लगाइदिनुपर्छ । साधारण रुघा लागेको भनेर हेलचक्र्याइँ गर्नु हुँदैन । ठीक भइहाल्छ भनेर धेरै दिन नकुरीकन बेलैमा उपचार गरिहाल्नुपर्छ । बच्चालाई राम्रो पोषण दिने खाना खुवाउनु नै रोगबाट बचाउने मुख्य उपाय हो ।
आमाको दूध खाएको छैन भने बच्चाको प्रतिरोधात्मक क्षमता राम्रो हुँदैन । त्यसैले बच्चा जति बढ्दै गयो, त्यसलाई रोग लाग्ने सम्भावना त्यति बढ्दै जान्छ । त्यसैले सानैदेखि राम्ररी दूध खुवाएको बच्चालाई रुघाखोकी लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ । पोषणमा ध्यान दिँदा बच्चाहरूलाई कम रोग लाग्छ । ६ महीनाभन्दा अगाडि आमाको दूध खुवाउन सकिन्छ । १ वर्षसम्म गाईभैंसीको दूध खुवाउँदा शरीरमा रगतको कमी हुन सक्छ ।
चिसो शुरू भएसँगै अस्पतालमा बिरामीको चाप कस्तो छ ?
चिसो बढेसँगै छातीको सङ्क्रमण भएका बिरामी बढ्न थालेका छन् । खोकी लागेका र श्वासप्रश्वासमा समस्या आएका पनि बिरामी बढ्न थालेका छन् ।
बच्चामा हुने कुपोषण कस्तो खालको समस्या हो ?
अधिकांश नेपालीलाई शरीरको विकासका लागि चाहिने पौष्टिक खानाको बारेमा थाहा छैन । बच्चाको शरीरलाई चाहिने पोषण मिलाएर खुवाउन सकिएन भने उनीहरू कुपोषणको शिकार हुन सक्छन् । हाम्रोमा ठूलो मानिसले जे खान्छन्, बच्चालाई पनि त्यही खुवाउने चलन छ । बच्चा र वयस्कको खाना तथा परिकारमा पनि फरक पर्छ । अर्कोतर्फ कति वर्षको बच्चालाई दिनमा कति पटक खाना खुवाउने वा नखुवाउने भन्ने विषयमा पनि जानकार हुनुपर्छ । बच्चालाई खुवाउने खाना उमेर अनुसार फरक–फरक हुन्छ । १ वर्षको बच्चालाई आमाको दूध सँगसँगै ६ पटकदेखि ८ पटक वा न्यूनतम पनि ६ पटक खुवाउनुपर्छ । तर, हाम्रो समाजमा बच्चालाई त्यसरी खुवाइँदैन । उनीहरूलाई चाहिने परिकारको पनि कमी भएको पाइन्छ । मानिसहरू काममा व्यस्त हुँदा पनि बच्चाको हेरचाहमा समय दिन सक्दैनन् । हाम्रो समाजमा जङ्क फूडको उपभोग बढ्दो छ । बच्चालाई बिहान के खुवाउने, बेलुका के खुवाउने कति मात्रामा खुवाउने जस्ता विषयमा ध्यान नदिँदा पोषण नपुग्ने सम्भावना हुन्छ । बच्चालाई पोषण अभाव हुनु नै कुपोषणको कारण हो ।
बच्चाको उमेर समूहअनुसार कसरी खुवाउनुपर्छ ?
बच्चाको महŒवपूण पोषक तŒव आमाको दूध नै हो । ६ महीनापछि भने त्यसको विकल्प प्रयोग गर्न सकिन्छ, जसमा दालको पानी, जाउलोलगायत खाद्यवस्तु खुवाउन सकिन्छ । विभिन्न गेडागुडी मिलाएर पिँधेर बनाएको लिटो बच्चालाई खुवाउँदा राम्रो पोषण पुग्दछ ।
त्यसैगरी, दालभातमा अण्डा मुछिदिने, हलुवा बनाउँदा घिउ मिसाउने, चिनी, सख्खर मिलाएर धेरै क्यालोरी बनाई खुवाउने पनि गर्न सकिन्छ । दूधका परिकार जति पनि खुवाउन सकिन्छ । बच्चाको उमेरअनुसार ३/४ घण्टाको फरकमा खानेकुरा खुवाउन सकिन्छ । १ वर्ष भने अलि समय खटाउन पनि सकिन्छ । त्यसरी नै नियमित रूपमा खुवाउँदै जाँदा बच्चाको स्वास्थ्यमा सकारात्मक सुधार हुँदै जान्छ ।
कुपोषित बच्चाको निदान तथा उपचार कसरी गरिन्छ ?
शुरूमा कस्तो किसिमको कुपोषित भनेर ग्रेडिङ गरिन्छ । त्यसपछि कुपोषित बच्चालाई खुवाउने छुट्टै फर्मुला पनि हुन्छ । उक्त फर्मुलाअनुसार तीन÷चारओटा वस्तु मिलाएर दूध, घिउ, पानी, चिनी मिसाएर क्यालोरी बनाइन्छ । त्यो मिसाएर बच्चाको तौल बढ्ने तरीकाले खुवाउने गरिन्छ । त्यसबाहेक पनि ६/७ प्रकारका मल्टी भिटामिन पनि हुन्छन् । कुन कसरी खुवाउने भन्ने विषय निक्र्योल गरेर बनाइएको पोषण र किनेको भिटामिन मिलाएर खुवाउन्छ ।
त्यस्तै आवश्यकताभन्दा मोटो भएमा पनि बच्चाहरू कुपोषित हुन्छन् । बच्चा बढी खानाका साथै अन्य कारण पनि मोटाउँछन् । त्यसका लागि पनि निश्चित क्यालोरी र खानपान मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।
बच्चालाई सहज तरीकाले कसरी हुर्काउन सकिन्छ ?
बच्चा जन्मेदेखि नै कुन उमेरमा के खुवाउने भन्ने विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ । कुन उमेरमा बच्चाले कस्तो क्रियाकलाप गर्छ भन्ने विषयमा पनि सामान्य ज्ञान हुनुपर्छ । जन्मेको ६ महीनासम्मको बच्चालाई आमाको दूध खुवाउनुपर्छ ।
बच्चाहरू ३ महीनामा मुण्टो ठड्याउने, ६ महीनामा पल्टिने र ८ महीनामा केही अडेस लगाइदियो भने बस्न सक्ने हुन्छन् । ८ महीनामा अडेस नलगाई बस्न सक्ने र १२ महीनामा केही नसमाई उभिन सक्ने हुन्छन् । सामान्यतया १२ महीनामा हिँड्न सक्ने हुन्छन् । बच्चाले उमेरअनुसार त्यस्तो गरेको छ वा छैन भन्ने विषयमा ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ । त्यस्तै, बच्चाको बोली फुट्ने उमेरमा फुटेको छैन भने बच्चाको विशेषज्ञलाई देखाउनु पर्दछ । बच्चाहरू उमेरअनुसार हिँड्न, खेल्न र बोल्न सक्छन् । बच्चा राम्रै भए पनि ३/४ महीनाको फरकमा विशेषज्ञलाई देखाउनुपर्छ । यसो गर्दा बच्चालाई सहज तरीकाले कसरी हुर्काउन सकिन्छ ।
बच्चालाई लगाइने सुईको बारेमा पनि केही बताइदिनुस् न ?
सरकारले अहिले नयाँ एक/दुईओटा भ्याक्सिन थपेको छ, जसमा रोटा भाइरस र इञ्जेक्टेबल पोलियो भाइरस छन् । रोटा भाइरसको इञ्जेक्सन सरकारले राखे पनि पूर्ति गर्न सकेको छैन । बच्चालाई सरकारले दिएकोजति भ्याक्सिन लगाइदिनुपर्छ । त्योबाहेक टाइफाइड, हेपाटाइटिस एलगायत भ्याक्सिन पनि बच्चालाई लगाउनुपर्छ । त्यस्ता भ्याक्सिनले रोग लाग्न कम गर्छ ।